iPad iCloud gurmad tricks ma uu doonaynin inuu aad rabto in aad ka maqnaan
iCloud waa ururinta dib-u-taariikhda adeegyada Kombuyuutarada daruur Apple ee. iCloud waxaa si rasmi ah ku dhawaaqday 6 June 2011.
iCloud saamaxaya kuwa isticmaala in ay ku kaydiso music, sawiro, videos, xusuusinta, xiriirada, hayaan, iBooks, iyo barnaamijyadooda iyo boosteejo ah oo servers email Apple ee bixisaa. Waa adeeg fudud oo xajiya, dhammaan qalabka aad u hagaagsan. Waxaad wadaagi karaan wax adeegga u dhexeeya ah iPhone, iPod, iPad iyo Mac. Macluumaadka ku jira qalabka oo dhan waxaa si toos ah la wadaago oo si xor ah ula shaqeeynayo wax tallaabo gaar ah u baahan yahay user.
Sahlo iCloud gurmad on iPad
Si aad u awood iCloud on qalab aad waa in aad hubsato in qalab la socda nooca ugu dambeeya ee macruufka. Haddii qalabka ma aha nooca ugu dambeeya ee macruufka badan hore waa in aad u cusboonaysiiso version of qalab aad ka dib markii ay raacaan talaabooyinkan si ay awood iCloud on your iPad ama qalab.
1. Tag menu goobta
2. Tubada on iCloud
Marka qalab aad ayaa la casriyeeyay by nooca ugu dambeeya ee macruufka badan raac tilmaamaha si aad u bilowdo iCloud on qalab aad.
3. Riix doorasho ee kaabta
4 Oo shid doorasho ee kaabta iCloud sida kor ka muuqata sawirkan.
iCloud on qalab aad in karti doonaa oo iCloud si toos ah dib doonaa xogta aad 24 saacadood kasta ama si, ilaa iyo inta qalab aad ku xiran Wi-Fi ama ku xiran ka qaadaan. Badanaa waxa ku dhacay marka aad huruddo tahay. Haddii aanad waligaa hadda taageeray ilaa iCloud ka hor, gurmad ugu horeysay qaadan kartaa muddo ah. Ka dib markii in, iCloud geliyaan oo kaliya isbedelada aad sameeyey tan iyo gurmad la soo dhaafay kaas oo ka dhakhso badan yahay. Wax walba oo qalab aad si toos ah synced doonaa oo aad la wadaagi karto macluumaad kasta oo ay u qalab aad wax Apple ee.
Maamul iCloud hayaan
kaabta iCloud jawaab idealize ah ka badan syncing la Lugood sida ay u dhacdaa si toos ah mar kasta oo qalab aad ku xiran shabakad Wi-Fi. User-saaxiibtinimo, laakiin waxaa jira qadar kooban oo lagu kaydiyo, users ilaa taageero badan oo ah alaabtii, ama dadka isticmaala aaladaha la kala duwan-, arki karaan kaydinta iCloud waxaa dhaqso u buuxsantay. Si loo maareeyo hayaan iCloud ay waxtar leh oo keliya waa marka hayaan waa si toos ah iyo si joogto ah u samaysay. Qalab macruufka ah ayaa isticmaala ay soo wargelin doonaa in Kaydinta iCloud waa buuxsamay, laakiin maaraynta kaydinta iCloud noqon karaa geedi socod adag. Halkan haatan waxa hagi doona aad sida aad naftaada u qanciso in qalab aad waxaa is kor joogto ah ku taageeray, maareeyaan iCloud goobaha lagu keydiyo.
Si aad u billowdo, falgali in app Settings ku saabsan Device macruufka iyo riix ama garaac iCloud ah.
Si aad u maamuli lahayd meel iCloud, garaac Kaydinta ah.
Waxaad arki doontaa tirada guud kumeelayn Kaydinta in iCloud meel aad hadda heshiiska ka. Haddii lagu kaydiyo ee la heli karo in ka yar 10 GB aad doonto u badan tahay in ay taageerto kor u adag tahay qalabka aad leedahay. Si loo cusboonaysiiyo, Tubada ku saabsan doorasho Plan Change Kaydinta. Waa war fiican in hadda qorshaha waxaa la bixiyaa bil halkii sannad walba sidii markii hore ay ahaayeen. Qorshaha kaydinta 200 GB noqon doonaa badan oo haddii aad si gaar ah daneeya qalab aad qalabka gurmad oo dhan.
Dabadiisna, garaac ikhtiyaarka Maamul Kaydinta iyo waxaad arki doontaa in files iyo hayaan isticmaalayso aad meel iCloud. Waxaad arki doontaa in sawiro qaadanayso meel aqlabiyad iCloud. Hoos waxaa ku qoran in aad arki doonaa taas hayaan qalab ay hadda badbaadiyey iyo qadarka kaydinta lagu qaaday app walba si gaar ah.
Inaan ku laabto bogga ugu weyn ee Maamul screen iCloud Kaydinta, users tago in iCloud Photo Library iyo tirtirto dhammaan sawiro ka daruurtii. Tani waa in la sameeyaa oo keliya haddii aad hubto oo ku saabsan photos yihiin badbaadiyey meel kale oo taageeray qalabka kale. Waxaad heli doontaa 30 maalmood ka dib marka aad tirto faylasha aad u gurmad hor Apple weligiis saaraysaa sawirada kuwa.
Ka dib marka aad fursado kaydinta maamulo, waa in aad hubsataa in kaabta iCloud ah oo uu leeyahay dhawaan la badbaadiyo. Raac tilmaamaha ku xusan siiyey inay dib u bilowdo.
Kabsado xogta ka iCloud gurmad eegista
Wondershare Dr. Fone ee macruufka waa macluumaad hore barnaamijyada kabsado lakiin adduunka ee aaladaha Apple. Waxaa la adeegsadaa in lagu iibin doono xiriirrada tirtiray, fariimaha deg dega ah, sawiro, qoraalo, updates cod, Safari Bookmarks oo dheeraad ah oo ka iPhone, iPad iyo iPod taabto. Kale oo ka soo kabanaya macluumaad straightforwardly ka iPhone, iPad iyo iPod taabto, waa sidaas oo kale aad u fasaxaya inuu ka soo kabsado macluumaad ka hayaan iCloud iyo Lugood eegista. Waxaa gebi ahaanba u qummanaado macruufka ugu dambeeyey 9, iPhone 6 (Plus), iPhone 6s (Plus), iPad Air 2 iyo qalabka badan oo kala duwan oo Apple.
Riix badhanka Download si aad u hesho Trial Free ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka.
Kabsado Xogta laga iCloud u qalab kasta oo macruufka
Waxaa jira ugu horayn 3 tallaabo oo aasaasi ah si ay u bogsasho macluumaad lumay ama la tirtiro ka iCloud dhex Dr. Fone ee macruufka
1. Marka hore ordi Wondershare Dr.Fone ee macruufka, soo qaado habka soo kabashada ee ka soo kabsado kaabta iCloud Files dusheeda ah. Halkaa marka ay marayso in aad arki doonaa suuqa kala. Waxaad ku qortaa account iCloud oo fure sir ah si ay u gasho.
2. Marka aad saxiixday galay iCloud, mashruuca wuxuu muujin karaa oo dhan hayaan iCloud in aad xisaabta. Dooro mid ka mid ah meesha aad ku socoto inuu ka soo kabsado macluumaad iyo garaac Download si aad u hesho waxa lagala soo bixi.
3. Sawirka macluumaadka. Soo saarka ayaa waxaa dhammaan doona wax yar. Marka la joojiyo, oo aad ku eegaan karaan dhammaan macluumaadka aad gurmad iCloud. Iyaga Hubi mid mid iyo sax wax aad u baahan tahay. Halkaa marka ay marayso tuubada in ku qabsado uu soo kabsan inay u tudhi aad kombuutarka la sax hal. Markaas xogta aad u baahan tahay waa la soo kabsaday.
> Resource > iCloud > iPad iCloud Tricks kaabta Waxaad dooneynin inuu u Miss